Snapchat bụ otu ewu ewu na-elekọta mmadụ media ngwa. Ngwa nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya, nke pụtara na anya m na nzacha ya, ka ndị na-eto eto na-eji. Snapchat, ngwa mgbasa ozi mmekọrịta nke kwụ ọtọ na nkata (vidiyo na ederede ozugbo), akụkọ (akụkọ otu), 3D bitmojis, eserese (akụkọ ndụ, nkesa ọnọdụ), ncheta, enwere ike ibudata na Google...
Gịnị bụ Tor Browser? Tor Browser bụ ihe nchọgharị intaneti a pụrụ ịdabere na ya maka ndị ọrụ kọmputa na-eche banyere nchekwa na nzuzo ha nịntanetị, iji chọgharịa na ịntanetị na-enweghị aha na ịnyagharịa site na iwepu ihe mgbochi niile na ụwa ịntanetị. Akụrụngwa ahụ, nke na-arụ ọrụ dị ka ọta siri ike maka nchebe nke okporo ụzọ netwọkụ gị...
APKPure dị netiti saịtị kacha mma na nbudata ngwa. Android ngwa APK bụ otu nime saịtị ndị a pụrụ ịdabere na ya nke na-enye gam akporo egwuregwu APK download njikọ yana enwere ngwa mkpanaka. Na APKPure (Download Downloader) ị nwere ike nenweghị nsogbu ibudata ọhụrụ gam akporo ngwa ọdịnala na egwuregwu na-apụghị ibudata site na Google Play...
Ngwá ụlọ MOD maka Minecraft PE bụ nhọrọ nke Minecraft mods na-agbakwụnye ihe dị iche iche ihe mods na ihe ndozi, mma Creative Mode gameplay. Ime ime na-adị mma noge a. Mfe tinye PC, TV, akwụkwọ mpempe akwụkwọ, ime ụlọ ịwụ, kaboodu na ndị ọzọ! Download Ngwá ụlọ MOD maka Minecraft Pee gam akporo You na-arọ nrọ otu desktọpụ PC nihu mgbidi...
The Witcher: Monster Slayer bụ ebe egwuregwu Spokko gbakwunyere na eziokwu, akụkụ nke ezinụlọ CD PROJEKT. Na-ewere ọrụ nke ọkachamara dinta dinta na egwuregwu na-eme ka ọ bụrụ eziokwu (AR) (RPG). Budata Witcher: Monster Slayer Onye Witcher: Monster Slayer bụ egwuregwu ịchụ nta anụ ọhịa nefu ị nwere ike igwu na ekwentị gam akporo gị nke...
Oge ụgbọ mmiri nke oge a bụ egwuregwu gam akporo ebe ị nyere iwu ka ị lụọ ọgụ na epic online naval agha. Budata ụgbọ agha nke oge a gam akporo Warsgbọ agha ndị agha kachasị ike nke oge a na-echere gị! Soro ndị enyi gị lụọ ọgụ na egwuregwu egwuregwu dị egwu nke oge a. Ga-abụ onye isi nke ụgbọ agha nke oge a. A na-eme ụdị egwuregwu niile...
Blitz Brigade bụ egwuregwu Fps ị nwere ike ibudata ma kpọọ nefu ma ọ bụrụ na ị na-eji kọmputa na Windows 8.1 sistemụ arụmọrụ. Blitz Brigade, egwuregwu ọzọ dị elu nke enyere ndị ọrụ Windows 8.1 site na Gameloft, nke a maara maka mmeri ya na egwuregwu egwuregwu, nwere ntọala dabere na Agha IIwa nke Abụọ. Site na ịhọrọ otu nime ndị iro...
Gigantic bụ egwuregwu egwuregwu dị nịntanetị nke anyị nwere ike ịkwado ma ọ bụrụ na ịchọrọ igwu egwuregwu yiri nke Overwatch. Gigantic, egwuregwu ị nwere ike ibudata ma kpọọ nefu na kọmputa gị, bụ egwuregwu wuru na usoro MOBA dị ka Overwatch. Anyị nwere ike ịlụ ọgụ na ìgwè nke 6 na egwuregwu ahụ. Onye ọ bụla na-egwu egwuregwu na-ahọrọ...
Ndị agha America: Gosi ala bụ egwuregwu FPS ụdị egwuregwu, egwuregwu kọmputa nke ndị agha America. Ndị agha America: Gosi ala, egwuregwu Fps ị nwere ike ibudata ma kpọọ nefu na kọmputa gị, na-enye ndị egwuregwu ohere isonye na ọnọdụ agha dị adị. Ndị agha America: Gosi ala bụ egwuregwu na-elekwasị anya na ahụmịhe ọgụ ọgụ nke obere otu....
Enwere ike ịkọwa Creativerse dị ka egwuregwu lanarị nke na-agwakọta Minecraft yana ihe akụkọ sayensị. Creativerse, nke ị nwere ike ibudata ma kpọọ nefu na kọmputa gị, bụ isi egwuregwu egwuregwu sandbox nịntanetị, ya bụ, ndị egwuregwu nwere ike ịmepụta ụwa nke ha site na ịkpụzi egwuregwu ụwa. Maka ọrụ a na Minecraft, anyị na-achịkọta akụ...
Kwuo maka ime ihe na-enweghị njedebe na ụwa nke ọgba aghara na Cross Fire na-achịkwa. Na-eweta ọhụụ ọhụrụ na ụdị MMOFPS nke Z8 Games bipụtara, Cross Fire na-enye atụmatụ ndị na-emepe emepe karịa ndị na-asọmpi ya, yabụ anyị nwere ike ịkpụzi ma wusie ike agwa anyị nwere na egwuregwu niile na ntuziaka anyị chọrọ. Cross Fire, nke zuru oke...
World of Tanks, nke gbasara Agha Worldwa nke Abụọ, meriri onyinye a na ụdị egwuregwu egwuregwu nke European Game Awards nke emere na Europe. Ihe ọzọ dị iche na egwuregwu ndị ọzọ emere ruo ugbu a bụ na ngwa agha bụ tankị. Amachibidoro ịghọ aghụghọ ma ọ bụ jiri aghụghọ na egwuregwu ebe a na-emepụta ezigbo agha na gburugburu ebe obibi site...
SMITE na-enye ndị na-egwu egwuregwu egwuregwu egwuregwu MOBA. MOdị MOBA nke malitere na Dota aghọwo ihe na-ewu ewu na egwuregwu dịka LOL na HoN. Anyị na-ekere òkè na agha netiti chi dị na SMITE, otu nime ezigbo ihe atụ nke ụdị a. Site na iji ike pụrụ iche nke chi dị na Greek, Ijipt, Scandinavia na akụkọ ifo ndị yiri ya, anyị nwere ike...
Ezubere StaffPad maka ndị na-ede egwu chọrọ iji egwu dee egwu site na iji njirimara aka. Nanị dee Apple Pencil dee egwu gị; ngwa ahụ na-eme ka ogwe ọ bụla ghọọ ihe mara mma nke na-enweghị nghọta ma nwee ike dezie ya site na iji aka ngwa ngwa ma ọ bụ ngwaọrụ Pencil. StaffPad ọbụna na-emekọrịta ọkpụkpọ ka ndị na - agụ ya niile nwee ike...
Spotify, otu nime ihe kachasị amasị egwu na-ege ntị maka ogologo oge, na-arịọ ka ụdị egwu dị iche iche na-ege ntị ka ọ na-enye ebe nchekwa egwu ya na - akwụghị ụgwọ. Na ngwa Spotify Windows, ị nwere ike ịge ntị na egwu ịchọrọ. Nwere ike ibudata ngwa ahụ site na ịpị bọtịnụ nbudata Spotify Windows. Mgbe ọrụ ahụ, nke na-eto kemgbe 2008,...
EaseUS, nke anyị maara maka mmemme ya nke ọma ọ mepụtara ruo ugbu a, amalitela ngwa ọhụụ. EaseUS RecExperts, enwere ike iji ya maka usoro ndekọ Windows, jisiri ike dọta uche na atụmatụ dị iche iche ọ na-enye. Ndekọ ihuenyo, ịkekọrịta onyonyo edere, bụ otu nime ihe ndị dị anyị mkpa noge na-adịbeghị anya. Maka usoro a, anyị ga-eji...
Adobe Premiere Rush bụ usoro mmezi vidiyo dị maka mkpanaka (gam akporo, ngwaọrụ iOS) na desktọọpụ (Windows, Mac kọmputa). Site na ntinye vidiyo na-arụ ọrụ niile maka okike ọdịnaya na njem, ịnwere ike ijide, dezie ma kesaa vidiyo dị elu site na ebe ọ bụla, ma ọ bụ na ekwentị gị ma ọ bụ na kọmputa. Budata Adobe Premiere Rush Premiere Rush...
K-Lite Codec Pack gụnyere ihe nzacha DirectShow, koodu VFW / ACM na ngwaọrụ. Codecs na DirectShow nzacha dị mkpa iji encode na itapia ọdịyo na video formats. Ezubere K-Lite Codec Pack dị ka azịza nke ndị ọrụ iji kpọọ faịlụ gị niile na faịlụ vidiyo. Na K-Lite Codec Pack ị nwere ike igwu egwu niile na-ewu ewu ọdịyo na vidiyo na ọbụna obere...
iFun Screen edekọ bụ ihe dị mfe iji na free ihuenyo ndekọ omume maka Windows PC ọrụ. Ihe ndekọ ederede kacha mma maka azụmahịa, agụmakwụkwọ, egwuregwu, nke onwe, oge ọ bụla. Anyị na-akwado usoro ihe omume ihuenyo ọkachamara, nke nwere ọtụtụ atụmatụ dịka oge ndekọ na-akparaghị ókè, ndekọ-lag-free na HD mma na-enweghị mmiri mmiri, na-ewere...
Site na Clipchamp, usoro mmemme edezi vidiyo kacha mma, ị nwere ike ịmepụta vidiyo dị egwu. Onye nchịkọta akụkọ vidiyo nke onye ọrụ na-enye gị ohere ịmepụta ngwa ngwa na ngwa ngwa ụlọ ọrụ, agụmakwụkwọ, nkwado, mgbasa ozi mgbasa ozi na mgbasa ozi vidiyo na ọtụtụ ndị ọzọ. Soro nde ndị ọrụ 16 karịrị mba 200 wee kọọ akụkọ gị site na enyemaka...
Dota 2 bụ ogige egwuregwu egwuregwu ọtụtụ egwuregwu nịntanetị - otu nime nnukwu asọmpi egwuregwu dị ka Njikọ nke Akụkọ Ifo na ụdị MOBA. Dota 2 bu mmeputa nke Valve meputara na nkowa karie ihe oma nke Dota, onye aha ya bu Nchebe nke ndi ochie. Dị ka a ga-esi cheta ya, Dota Warcraft 3, nrụpụta onwe onye nke gosipụtara dị ka usoro...
Project Argo bụ egwuregwu FPS ọhụrụ nke Bohemia Interactive, nke mepụtara egwuregwu Fps na-aga nke ọma dịka ARMA 3. Project Argo, egwuregwu agha ị nwere ike ibudata ma kpọọ nefu na kọmputa gị, nwere ike ịtụle dị ka ụdị nke ARMA 3 nke gụnyere obere agha. Dị ka a maara, ọtụtụ ndị egwuregwu nwere ike ịlụ ọgụ notu oge na ARMA 3, ebe na...
Njikọ nke Akụkọ Ifo, nke a makwaara dị ka LoL, bụ nke Riot Games wepụtara na 2009. Studiolọ egwuregwu ahụ, nke kwenyere na Steve Freak, bụ onye haziri map DotA, wee tụgharịa aka ya maka egwuregwu MOBA ọhụrụ, bịara na League of Legends (LoL) mgbe mmepe ogologo oge. Nadịghị ka egwuregwu ahụ ọ sitere nike mmụọ nsọ, mmepụta ahụ, nke...
Team Ebe e wusiri ike, nke mbụ wepụtara dị ka ihe tinye na na Ọkara-Ndụ, nwere ike ugbu a na-egwuri maka free na ya. Na Team ebe e wusiri ike 2, nke dị na ụdị MMOFPS, ị nwere ike ịhọrọ otu nime klaasị itoolu wee kewaa abụọ wee soro ndị ọzọ egwu. Di iche iche na nguzozi nke klas na egwuregwu, nke gunyere otutu uzo na ebumnuche, bu ihe...
Otu nime ụdị ndị natara nlebara anya kachasị na akụkọ egwuregwu vidio dị ugbu a bụ doro anya FPS. Ọ bụ ezie na anyị maara ya nke ukwuu site na aha ndị dị ka Counter-Strike, Half Life ma ọ bụ Mbibi, egwuregwu FPS nke anyị na-ahụ nanya nke onye mbụ na ịhụnanya ịgbasa ọkụ ka bụ ngwaahịa na-ejikwa igwu egwu egwuregwu mbụ na egwuregwu nke oge...
Site na nbudata Avast Premium Security (Multi Device) 2020, ị ga-echedo Windows, Mac, iOS, Android gị, ngwaọrụ gị niile. Avast kasị ike nche software, Avast adịchaghị Security (Multi-Ngwaọrụ), na-echebe ruo 10 ngwaọrụ. Karịa antivirus, Avast Premium Security (Multi-Device) na-enye nchebe zuru oke nịntanetị maka desktọpụ gị na ngwaọrụ...
RusVPN bụ mmemme VPN kachasị ọsọ nke ị nwere ike iji na Windows PC, ekwentị, mbadamba, modem, ngwaọrụ niile. Ọrụ VPN ị nwere ike iji abanye na saịtị ndị amachibidoro, mee ka ọsọ ọsọ ịntanetị, egwu egwuregwu, gaa na ịntanetị na-enweghị aha (zoo adreesị IP gị). Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe omume VPN a pụrụ ịdabere na ya na ngwa ngwa maka...
Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe ngwa ịgbawa Apple ID paswọọdụ ma ọ bụ ịgbawa iPhone ihuenyo mkpọchi Paswọdu, iMyFone LockWiper ka emere maka nke ahụ. Iji zụta, gaa na adreesị a. Ichefu gị iPhone ihuenyo mkpọchi paswọọdụ ma ọ bụ Apple ID bụ otu nime ihe ndị kasị nkịtị ọnọdụ. Dị ka ị maara, ọ nwere ike isi ike iburu ha niile nuche na oge dijitalụ...
AVG Secure VPN ma ọ bụ AVG VPN bụ mmemme VPN nefu maka Windows PC, Mac kọmputa, ekwentị gam akporo na ndị ọrụ iPhone. Iji kpuchido netwọki WiFi gị ma chọgharịa na ịntanetị naanị, budata mmemme VPN na kọmputa gị site na ịpị bọtịnụ AVG VPN Download dị nelu. You nwere ike ịnwale atụmatụ niile nke ọrụ VPN nefu maka ụbọchị 7. Download AVG...
Ultimate ZIP Cracker na-eje ozi na ndị ọrụ Windows dị ka mmemme Zip faịlụ paswọọdụ / mwepụ. I nwekwara ike ịgbawa okwuntughe nke ezoro ezo RAR faịlụ, Microsoft Okwu na Excel faịlụ na mmemme a. Ultimate ZIP Cracker - Faịlụ Paswọdu Cracker Ọtụtụ mgbe, ọ nweghị ụzọ ga-esi nwetaghachi ma ọ bụ mebie paswọọdụ ozugbo. Nwere ike ịnwale...
Advanced PDF Paswọdu Iweghachite ndị ọrụ Windows PC dị ka mmemme mwepụ paswọọdụ / paswọọdụ PDF. Jiri Advanced PDF Paswọdu Iweghachite iji wepụ ihe mgbochi PDF ozugbo, dezie, bipụta ma detuo faịlụ PDF echedoro paswọọdụ. Ihe omume a nwere teknụzụ enyere aka (Tebụl Thunder) nke na-enyere ike ịmepe paswọọdụ na-erughị otu nkeji na izo ya ezo...
Nwere ike ịlele faịlụ nchekwa ZIP na kọmputa gị na sekọnd na ngwa Zip Opener. Ngwa ZIP Opener, nke bụ otu nime faịlụ faịlụ a na-ejikarị na andntanetị na nke a na-eji maka ebumnuche dịka iwepụ obere ohere na ịchekwa faịlụ ndị ahụ nụzọ doro anya, nwere ike ịlele faịlụ ndị ZIP na-arụ, na-arụ ọrụ dị ka a ga - asị na ọ na - eme adịghị adị na...
InnoExtractor bụ mmemme dị ntakịrị ma dị irè nke ị nwere ike ịnweta faịlụ ndị dị na faịlụ ntinye Inno. Nụzọ dị otú a, ị nwere ike mfe nweta faịlụ na mmemme na-enweghị wụnye ha. No nwere ike imeri nke a na InnoExtractor, ọkachasị ma ọ bụrụ na ịnweghị ikike nchịkwa iji gbaa faịlụ ntọala. Ebe ọ bụ na enweghị atụmatụ dị mgbagwoju anya na...
Ashampoo Zip Free bụ usoro mmemme na-enyere ndị ọrụ aka ịmepụta ma mepee ebe nchekwa. Ashampoo Zip Free, nke bụ sọftụwia Archive nke ị nwere ike ibudata ma jiri kpamkpam na kọmputa gị, na-enye gị ezigbo mma na ịkekọrịta faịlụ na nchekwa. Site na Ashampoo Zip Free, ị nwere ike mepee faịlụ nchekwa na usoro zip. Ekele maka atụmatụ a, ọ bụ...
7-Zip bụ sọftụwia na - akwụ ụgwọ nefu ma dị ike nke ndị ọrụ kọmputa nwere ike ịpịkọta faịlụ na folda na draịvụ ike ha ma ọ bụ decompress faịlụ. Ọ bụ ezie na enwere ọtụtụ mmemme mkpakọ mmemme nahịa, 7-Zip bụ nhọrọ mbụ nke ọtụtụ ndị ọrụ nihi nkwado ya na usoro ya na enweghị ego ọ bụla. 7-Zip, nke ị nwere ike ịmalite iji mgbe usoro ntinye...
WinZip, otu nime sọftụwia izizi nke na - abata m nuche mgbe ọ na - abịakute faịlụ mkpakọ na mmemme decompressing faịlụ, bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na ọ bụ otu nime mmemme akuko eji eme ihe nụwa niile. Nke ukwuu nke mere na maka ọtụtụ ndị ọrụ e nwere ma WinRAR ma ọ bụ WinZip. Budata WinZip WinZip; .zip, .rar, .tar, .bz2, .zipx, .7z, .cab,...
Zipware bụ mmemme mmemme mkpakọ siri ike nke ị nwere ike iji na kọmputa gị. Na mmemme na-akwado ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ usoro nchekwa akwụkwọ niile, ọrụ gị na-adị mfe ma ị nwere ike iwekọta azụmahịa buru ibu mfe. Zipware, nke so netiti ndị na - eji compresị na faịlụ ndị a na-ewu ewu dịka Winrar na Winzip, bụ mmemme ị nwere ike iji dị...
PeaZip archiver bụ usoro ihe ntanetị na nefu maka ndị ọrụ kọmputa. Mepụtara dị ka ihe mepere emepe, usoro mmemme a na - akwado 7Z na 7Z-sfx, nke bụ ụdị pụrụ iche nke 7-Zip, mkpakọ na ntinye akwụkwọ yiri ARC / WRC, BZ2 / TBZ2, GZ / TGZ, PAQ / LPAQ Ọ na-enyekwa nkwado zuru oke maka usoro dịka PEA, QUAD / BALZ, TAR, UPX, ZIP. Ihe omume a...
PowerArchiver bụ usoro nchekwa ederede dị ike nke na-akwado usoro faịlụ ejiri jikọtara ọnụ taa, yana sọftụwia na-aga nihu na-etolite dị ka azịza ọkachamara yana ngwa ọrụ yana njirimara ya. Ihe omume ọkachamara a na-ahụ maka Archive, nke nwere interface dị mfe ma nwee ike iji onye ọrụ ọ bụla jiri Windows Explorer mwekota, gụnyere ZIP,...